သငျသညျပိုကြီးချင်ပါနဲ့ ရင်သား? သင်ထင်ပါနဲ့ လေ့ကျင့် သငျသညျသူတို့ကိုပေးစေခြင်းငှါ,? ဒါကြောင့် အကယ်., ဤနေရာတွင်သင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါတစ်ဦးဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဖွင့်. (ဒါပေါ့, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤပုံပြင် print ထုတ်ခွင့်ပြုချက်မေးလျှင်, နှင့်အမည်များကို privacy ကိုကာကွယ်ပြောင်းလဲနေကြတယ်).
တစ်ဦးကမိန်းမပျိုငါ့ကိုဒီမေးလျှင်, စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်.. သူမ၏မေးခွန်းခဲ့သည် “ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်နေလျှင်, ငါ့ရင်ပိုကြီးရလိမ့်မည်? သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုချီကြွတော်မူမည်, နူးညံဖြစ်လာကြပြီးငါအသက်ငယ်စဉ်အခါဖြစ်ဖို့အသုံးပြုတူ Fuller? အမှန်အတိုင်းပြောရရင်, ငါခဏတှနျ့ဆုတျ, ဒီတစ်ခုဖြေဆိုမီက. ဟုတ်ကဲ့, ငါတကယ်သူမ၏လှုံ့ဆျောပေးချင်တယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသစ်တစ်ခုကိုကြံ့ခိုင်ရေးကို client အဖြစ်သူမ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိ. နှင့်, ငါသည်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်သူမ၏လက်ရှိအလိုဆန္ဒမှ re-ညှိသူမ၏မီးနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ချင်တယ်. အကြှနျုပျ၏အကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုအခြားလူများသူတို့ကိုယ်သူတို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုမြင်လျှင်ထံမှလာ, သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်အကွံဉာဏျကနေလာအထူးသဖြင့်အခါ,, ပညာရေး, အကြံပြုချက်များ, သူတို့ကိုငါမှဆောင်ခဲ့သောနှင့် / သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်.
သို့သော်, ငါ၏အကျင့်ဝတ်အမြတ်အစွန်းအဘို့အကြှနျုပျ၏အလိုဆန္ဒထက်အများကြီးတန်ခိုးကြီးကြ. အစားအသောက်များတွင်အတွက်ကျင့်ဝတ်, လေ့ကျင့်, နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးအလွန်တန်ဖိုးရှိသောကုန်စည်များမှာ. သူတို့ကဇာတ်ကောင်နှင့်အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုပေးရည်ရွယ်ချက်ဖျောညှနျး. ထိုကွောငျ့, ငါပေါ် မူတည်. ထိုလူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်းဖြေဆိုမီကတွန့်ဆုတ်. ငါသူမ၏မျက်စိထဲမှာကြည့်ရှုတွေ့မြင်နိုင်. သူမသည်အကြှနျုပျလိုခငျြကြပေမည်, တစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာအဖြစ်, ပြောရန်, “ဟုတ်ကဲ့, ၏သင်တန်းကိုသင့်ရင်သားပိုကြီးဖြစ်လာလိမ့်မည်, နူးညံ, နှင့်ခဝါသည်, သူတို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုရုံနဲ့တူ. သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။” အမွန္တရား, သို့သော်, အတော်လေးအံ့အားသင့်စရာနှင့်သင့်ဖြစ်နိုင်ခြေမျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ကောင်းဆန့်ကျင်သည်.
ငါဘာသာရပ်သုတေသနမှစတင်ခဲ့သည့်အတိုင်း, “သဘာဝကရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်,” များစွာသောအမှန်တရားတွေသိသာဖြစ်လာတယ်, နီးပါးချက်ချင်း. ဒါပေါ့, မှသင်၏အများဆုံးချက်ချင်းဖြေကြားမှုများကိုသင်ရှာတွေ့ အင်တာနက်ကို သတင်းရပ်ကွက်များ. အထွေထွေလူထုအဖွဲ့ဝင်များ, အဘယ်သူကိုအများအပြားမျှအသိအမှတ်ပြုပြီ, တရားဝင်ပညာရေး, သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်လေ့ကျင့်ရေးကျွမ်းကျင်မှု, ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားအယူအဆတုံ့ပြန်မှုကိုဖန်တီးရန်အခမဲ့. ဤသူတစ်ဦးချင်းစီပေမယ့် (နှင့်အချို့သောသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, လွန်း) ကောင်းစွာဆိုလိုခြင်းငှါ, သူတို့ရိုးရိုးတိကျမှန်ကန်မှုကင်းမဲ့, အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သုတေသနလုပ်ငန်းပို့ချ၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံ.
အခုတော့, ငါချက်ချင်းသတိပြုမိသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြပါရစေ. သဘာဝကရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်အပေါ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး query ကိုအပေါ်သို့, တော်တော်များများကို web ဆိုဒ်များကွဲလွဲသတင်းအချက်အလက်ပြသ. ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းဆိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကပြောသည်, သတ္တုဓာတ်, နှင့်ဗီတာမင်ချဲ့ရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရင်သားကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း. နောက်တစ်နေ့ဆိုက်ကဆိုသည် “လေ့ကျင့်” အနည်းဆုံးအားဖြင့်ရင်သားအရွယ်အစားကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ “အက္ခရာ။” တတိယကပြောသည် “ဘာမြှ” မျိုးရိုးဗီဇတယောက်တည်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်သောကွောငျ့ကိုကူညီလိမ့်မယ် ရင်သားအရွယ်အစား. တစ်ဦးကစတုတ္ထတနေ့လုံးဖိအားညှပ်ဝတ်ဆင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုခွက်ကို-အရွယ်အစားအားဖြင့်ရင်သားကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့အခိုင်အမာ.
သငျသညျပြီးသားမြင်စေခြင်းငှါ, အဖြစ်, ပူဇော်သက္ကာ, ပြန်ကြားချက်, နှင့်အကြံပြုချက်များအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာထည့်သွင်း, နည်းလမ်းများ, နှင့်နည်းပညာများကို. စုတ်ယူခြင်းနဲ့ဖိအား devices များရှိခဲ့သည်, လိမ်းဆေး, encapsulated ဟော်မုန်းထုတ်ကုန်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် “enhancers,” အာဟာရဖြည့်စွက်, စသည်တို့ကို. ပင်အကြောင်းကိုဝါကြွားအနည်းငယ်ဆိုဒ်များ “အထူးလျှို့ဝှက်လေ့ကျင့်ခန်း။” (ဒါပေါ့, သူတို့ဘာကဤထူးခြားသောပြောမီကသင်ပထမဦးဆုံးပေးချေခဲ့ရသည်, အသစ် “အထူးလျှို့ဝှက်လေ့ကျင့်ခန်း” ခဲ့ကြ, ရှိလျှင်။) အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသိပ္ပံပညာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမကပြောပါတယ် “အထူးရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်လေ့ကျင့်ခန်း။” သတင်းအချက်အလက်၏ဤအမျိုးအစားမှသာဖောင်းပွဖြစ်ပါသည်. စမဝယ်ပါနဲ့. သိပ္ပံပညာနှင့်အတူကပ်ထားပါ. အသိအမှတ်ပြုသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များနှင့်အတူကပ်ထားပါ. လိုင်စင်အားဖြင့်သင်တို့၏အသိပညာကိုထိန်းသိမ်းပါ, တရားဝင်လေ့ကျင့်သင်ကြားတတ်ပညာရှင်များ. အထူးသဖြင့်, မြင့်မားသောထိနျးသိမျးရသူအအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်အတူသာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း “ကျင့်ဝတ်” စံချိန်စံညွှန်းများ.
ဒီသိရန်သင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ. ဤတွင်နဲ့ဆက်စပ်အမျိုးမျိုးသောသဘာဝအပါဝင်ပစ္စည်းများအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်၏အခြေခံရလဒ်ဖြစ်ပါသည် “ရင်သားကျန်းမာရေးကို။” ဤရွေ့ကားပါဝင်ပစ္စည်းများတိုးမြှင့်ဖို့အခိုင်အမာသောသူတို့ကိုမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည် “ရင်သားအရွယ်အစား။” သငျသညျထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဖော်ပြချက်များထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့် ပတ်သက်. စေ့စပ်ရှိရမည်. သောကအင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးစကားပုံရှိပါတယ်, “သငျသညျပြီးသားငျလိုခငျြသောအရာကိုသိရန်ရှိသည်, သင်ကရှာတှေ့နိုငျမီ။” တစ်နည်းပြောရရင်တော့, တောင်း “ရင်သားကျန်းမာရေးကို” သငျသညျထက်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုပေးသည် “ရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်” သို့မဟုတ် “ရင်သားကင်ဆာပျတိုး,” သို့မဟုတ်ပင် “သဘာဝကရင်သား။”
ဥပမာအားဖြင့်, အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများကွိုးစားအားထုမှအခိုင်အမာ “Anti-ကင်ဆာ” လုပ်ငန်းဆောင်တာ. ဆဲ, အခြားသူများကိုသတင်းများအရရင်ပတ်ကိုချဲ့ထွင်စေဟုဆိုခဲ့သည် (သို့မဟုတ်, အနည်းဆုံး “ပေါ်လာ” သို့) အရွယ်အစားတကိုယ်လုံးရောင်. မုချ, သငျသညျအောကျပါတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ကြောင်း. တချို့ကအာဟာရဓာတ်အမှန်ပင်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းမှသင့်ရဲ့ဆဲလ်တွေကာကွယ်ဖို့အတွက်လေ့မရှိဘူး. အနည်းဆုံး, ကင်ဆာဆဲလ်များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထေမိစေခြင်းငှါအချို့ရှိပါတယ်. ဤ, သို့သော်, အလိုအလျောက်တစ်ရှူးပိုကြီးပေါ်လာနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုကြီးကြီးထွားလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ. သင်သည်သင်၏မွမ်းမံလိုက်တဲ့အခါ “ရည်ရွယ်ချက်,” သင်ကျေနပ်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ပေးနိုငျကွောငျးအရာတစျခုခုကိုရှာတှေ့ဖို့ပိုများပါတယ်.
သငျသညျအပျေါ Bottom Line စေချင်ပါနဲ့ “သဘာဝ” ရင်သားချဲ့?
အဲဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပါသည် “ဘာမြှ” ရရှိနိုင်ပါနှင့်လက်တွေ့သင်ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုပေးမည်. ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်အဘို့ဤအောင်မြင်မှုရရှိရန်နီးစပ်လာတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည် “ဖိအားညှပ်” ခံယူချက်. သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သငျသညျအကွောငျးကိုအဘို့အတနေ့လုံးဖိအားညှပ်ဝတ်ဆင် 20 သို့ 30 ရက်ပေါင်း non-stop. အကယ်စင်စစ်, သငျသညျကလူထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အချိန်စီစဉ်လို့မရဘူးမည်မျှတွေ့မြင်နိုင်သည်. အဆင်ပြေဆက်ဆက်သငျသညျကိုသာသက်ရောက်စေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. နှင့်, သငျသညျရင်သားကင်ဆာပျတိုး technique ကိုဤအမျိုးအစားများ၏အီခံနိုင်? အနည်းဆုံး, ဒီအယူအဆကိုအချို့သောကုသိုလ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲသင့်ရဲ့အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အောင်မြင်မှုဖြေရှင်းချက်မပေးမယ့်. အခုတော့, အောက်ပါစဉ်းစားပါ.
တစ်ဦးအတွက် “သဘာဝက” လမ်း, ဘာမျှကြောင်းအမှန်တကယ်သင်၏ရင်သားကိုနူးညံစေမည်တည်ရှိ, ခဝါသည်, သို့မဟုတ်ပိုကြီးသော. သင်လုပ်နိုင်သည်, သို့သော်, အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက် “သဘာဝကကနျြးမာရေး” သင်၏ရင်သား၏. ထို့အပြင်, လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ, သငျသညျသဘာဝ၏အရွယ်အစားနှင့်ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် ကြွက်သား သင်၏ရင်သားအောက်အလွှာ. ဤရွေ့ကားကြွက်သားအလွှာ (ခေါ်တော် “pectorals”) သင်တစ်ဦးအနည်းငယ်ပိုမိုမြဲမြံစွာအသွင်အပြင်ကိုပေးနိုင်ပါသည်. ဒါကကြွက်သားတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်လာမှသာရှိသောကြောင့်မှန်, မသင့်ရဲ့ mammary ဂလင်း. အဖြစ်မှန်မှာတော့, ရင်သားအဆီတစ်သျှူးများထားရှိရေး, မရကြွက်သား. အဆီခဲနိုင်ပါတယ် “ခိုင်မာသော” တို့ထိရန်, နှင့်အဆီသင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုကပေးစေခြင်းငှါခဲဖွယ်ရှိသည်, အစိုင်အခဲသဏ္ဌာန်.
အခုတော့, “box ကိုပြင်ပထင်” ရုံခဏ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းဇာတ်လမ်းလိုင်းပြန်, သံအရာသငျသညျအကွောငျးကိုဖတ်ပါ, မိန်းမသည်ပြီးသားအလွန်ကြီးမားရင်သားသိမ်းယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
ထောင်ပေါင်းများစွာ “လျောက်ပတ်သောအရွယ်” မင်းသမီးလို “သတ်ဖြတ်” သူမကပြီးသားရှိပါတယ်အဘယျသို့ရှိသည်. သို့သော်, သင်၏ရင်သားအလုံအလောက်ကောင်းတဲ့မကျမည်အကြောင်းခံစားချက်အခြားအချက်အလက်များထံမှလာ. သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလည်းသူတို့ရဲ့လျော်သောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် symmetry ကင်းမဲ့နိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့အလုံးစုံကြံ့ခိုင်ရေး (အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်အဆီအချိုး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အစွမ်းသတ္တိနှင့်သည်းခံခြင်း) သို့မဟုတ်ပျမ်းမျှအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆင်းရဲသားတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ဒါကြောင့်, ဤနေရာတွင်သင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်နိုငျသောရင်သားကင်ဆာပျတိုး / တိုးမြှင့် / ကျန်းမာရေးဖြေရှင်းချက်င်, လုနီးပါး, အစဉ်အမြဲ. စုစုပေါင်း FIT ဖွေစျလာ. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအကွောငျးကိုအထက်ဖတ်မိန်းမနှင့်, ခါးအရွယ်အစားလျှော့ချအပြန်အလှန်ရင်သားကင်ဆာအရွယ်အစားပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့. သင်ဤဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါနဲ့? လေ့ကျင့်ခန်းသိပ္ပံ, တစ်ဦးကိုခေါ်တစ်ခုခုရှိ “ခါး-to-တင်ပါးဆုံရိုး” အချိုးအစား. ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာသည်သင်၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကိုတိုင်းတာ. သို့သော်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခါး-to-တင်ပါးအချိုးနှင့်အတူ, သင့်ခန္ဓာကိုယ် “ရူပ” ကောင်းသော, လွန်း. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအရပ်မြှင့်တင်ရန်ရန်သင့်ခါးကိုလျော့ချ, အသွင်အပြင်, နှင့်အယူခံဝင်.
နောက်တစ်ခု, သင့်ရဲ့ရှိပါတယ် “ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှု.” ဒါဟာသင့်ရဲ့အရေပြားအောက်ဆုံးတစ်သျှူးအလွှာအတွက်သယ်အဆီပမာဏ၏တစ်ဦးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် (ချက်ချင်းသင့်ရဲ့အသားအရေရဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော). ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်သယ်ဆောင်ကြွက်သားဖို့အဆီတစ်အချိုးဖြစ်ပါသည်. အေရိုးဗစ်၏လက်တွေ့မဆိုပေါင်းစပ်မှတဆင့်, ကာယဗလ, တည်မြဲခြင်း, အသံ, သို့မဟုတ်အစှမျးသတ်တိယလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများ, သငျသညျသိသိသာသာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်. ဤ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, သင့်ရဲ့ခါး၏အရွယ်အစားပိုကောင်းစေပါတယ်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ထည်၏ပေါင်းပုံသဏ္ဍာန်, အကျိုးဆက်, သင်၏ရင်သား၏အသွင်အပြင်. မြို့သားသင့်ရဲ့တည်ရှိသည် “ရင်သားကင်ဆာပျတိုး,” ထို “သဘာဝအလမ်း။”
ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုနှစ်သက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သို့သင့်ရဲ့လမ်းကိုလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်င်, နဲ့သကျလုံတဲ့အဆင့်မြင့်ကနှင့်တကွကြွလာ. ဒါဟာသင့်အတွက်တစ်ဦး Win-Win အခြေအနေ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများမပါဘဲ, မရှိအပျက်သဘောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူ. ကူညီပါ “သဘာဝ” သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကြောင်း N လုပ်ဖို့ထင်နေသည်ဘာလုပ်ကူညီခြင်းဖြင့်၎င်း၏သင်တန်းကိုယူ, ဖျော်ဖြေဖို့. သင့်ရဲ့သင်တန်းဆရာသို့မဟုတ်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအထူးကု Call များနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအရ. ထိုအခါ, ပျော်စရာများနှင့်ထိရောက်သောအစားအစာနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ဂီယာသို့ခြေလှမ်း, လေ့ကျင့်, နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ. သင်၏ရင်သားလို့ပြောပါလိမ့်မယ်, “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
30061	1 Brassiere တိုင်းတာခြင်း, ရင်, ရင်သားကင်ဆာ, ရင်သားကင်ဆာ implants, ကျန်းမာခြင်း, ကြွက်သား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း, ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
←4အကြွေးလျှော့ချရေးအတှကျသိကောင်းစရာများ Tanning ကုတင်နှင့်အတူတစ်ဦးကကျန်းမာ Tan က Get →